Somaliland.Org » Wararkii Wargeyska Ogaal ee Caddadkii maanta oo Axad ah
Wararkii Wargeyska Ogaal ee Caddadkii maanta oo Axad ah
June 28th, 2009 Comments Off M/weynaha Jabuuti oo ka digay in Al-Shabaab sabab u noqoto in Caalamku ku duulo Somalia
“Haddaan maanta laga gaadhin Al-Shabaab, Soomaaliya meel daran baa laga doon-dooni”
“Kuwa maalin walba sidii Adhiga loogu gawracayaa (Muqdisho) maxay galabsadeen?….Mushtamaca Caalamka waxaan leeyahay….”
Hargeysa (Ogaal/RTD)- Madaxweynaha Jamhuuriyadda Jabuuti Ismaaciil Cumar Geelle, ayaa ka dayriyay xaalada uu xilligan ku sugan yahay dalka Soomaaliya iyo xiisadaha colaadeed ee ka taagan halkaas.
Madaxweyne Ismaciil Cumar Geelle oo shalay khudbad dheer ka jeediyay munaasibad loo sameeyay xuska sannad-guuradii 32-naad ee ka soo wareegtay qaranimada dalkiisa, waxa uu beesha Caalamka ugu baaqay in loo gurmado sii wax looga qaban lahaa kooxaha Xag-jirka ah ee Soomaaliya oo uu ku tilmaamay inay qarka u saaran yihiin inay inqilaabaan dawladda Shariif Sh. Axmed. Isla markaana waxa uu tilmaamay in kooxaha Mucaaradka ah ee ka dagaalamaya Koonfurta iyo badhtamaha Soomaaliya ay u adeegayaan danaha dalal shisheeye, khatarna ku yihiin xasiloonida qaaradda Afrika iyo guud ahaan Caalamka. Khubadda Madaxweynaha Jabuuti oo dhinacyo badan taabanaysay, qaybta uu kaga hadlay xaalada murugsan ee haatan ka taagan Soomaaliya, waxa ay u dhignayd sidan;
“Wax badan baynu hore uga hadalay arrimaha Soomaaliya, laakiin maanta meel daran iyo meel halis ah bay joogtaa. Wixii hadhay ee kolba dhulka laga qaadayay, la yabyabayay, dunida loogu yeedhayay ee la odhanayay ‘walaalahayow kaalaya oo nala qabta, waa kuwan oo way isku soo dhawaadeen, way heshiiyeen oo waa kuwan aan isku keenaye dawlad iyo Xukuumadba aan la dhisno aanu lahayn, waxaa ka horyimi kuwo dad kale u adeegaya, dawladdo kale u adeegaya oo leh Soomaaliya cidkasta oo Muslim ah baa leh. Islaam waa la wada yahay oo Milyaar iyo siyaado Muslim ah baa dunida ku dhaqan, laakiin dal waliba wuxuu leeyahay xukunkiisa, Calankiisa, qarankiisa iyo umaddiisa. Caddaan, Casaan iyo Madow intaba waa la leeyahay oo waa wada Islaam….Laakiin, waxa loo jeedaa Islaam maaha oo waa siyaasad oo dad meel ay tagaan la’, wadamadoodii laga caydhiyay, kuligood Dhagar-qabeyaal ah, meel ay ku dhuuntaan la’ ayaa raadsanaya meel ay salka dhigaan, kana weeraraan Islaamka Adduunka jira iyo dawladdaha Afrika dhamaantood. Ma qarsanayaan oo waad ka maqasheen Idaacaddaha iyagoo leh (Al-Shabaab) ‘qofku kol hadduu Islaam yahay xagayaga shisheeye maaha.’ Balse, lagu dayn maayo sidaa umadda Soomaaliyeed haddii halkaa la gaadhsiiyay. Maanta haddii raggaasi la wareegaan (Al-Shabaab/Xisbul-Islaam) wadanka Soomaaliya wuxuu geli doonaa meel aan dib looga soo qaban karin, waxayna duulimaad ku yihiin Adduunka oo dhan, sababtoo ah waa dad socda, waana in la iska qabto.
Maanta waad la socotaan Pakistaan gobonimadeedii halis bay ku jirtaa. Iyagoo Nukliyeer haysta ayaa haddana halis ka gelinayaa, waxaana lagu gelinayaa iyadoo umaddeedii laga rabshayo, dalkeediina lix meelood loo kala gooyay, waxa loo socdaana waan la baabi’iyo Pakistan. Laakiin, Pakistan Soomaaliya la itaal maaha, balse waabay uga jilicsan tahay oo waxay ku degdegayaan (kooxaha Xag-jirka ahi) horta aad halkan cagaha dhigtaan, ka dibna Afrika inteeda kale aad weerar ku bilawdaan. Waxaanu leenahay mushtamaha Adduunka dhamaantii; Islaamkiisa, Gaalkiisa, Yurubiyaankiisa, Ameerikaankiisa iyo Aasiyaankiisaba – arrintaasi halis maanta halkan joogta weeyaan, berina xagiinay iman doontaa. Haddii la gaadhi waayo maanta, meel daran baa laga doon-dooni Soomaaliya. Ragga Soomaaliyeed ee moodaya inay munsab (xil) ku helayaan iyo inay xukun ku helayaan sidaa, been bay isu sheegayaan. Dharaarba mid baa sidaa loo gawrayaa sidii Adhiga. Madaxdii, Wasiirradii, Culimadii oo dhan dadka la laynayaa waa dadkii akhyaarta ahaa ee wadanka. Kani waa Suxufi oo shalay baa la dilay, Wasiir buu ahaa oo shalay baa la dilay, Mutacalim buu ahaa oo shalay baa la dilay, Xildhibaan buu ahaa oo inta aqalkiisa loogu tegay baa la dilay, waana la gawracay siduu neef Adhi ah yahay!. Maxay galabsadeen ee lagu dilay? Waxba. Kuwa imika sacabka u tamaya waxaas uun baa haysta oo beri sidaas uun baa loo geli doonaa. Waxaanu soo aragnay dadkaas (Soomaaliya) maanta marka nin Madaxweyne la yidhaahdo (loo doorto) kii la socday baa odhanaya haka dunto, haka xumaato, adigay kuu soo bixi doontaa, dhulka kolkay ku dhacdo ayaad adigu wax heli doontaaye, laakiin been buu sheegayaa. Nin waliba wuu seegay, imikana in la wada seego ayaa qaabkan loogu jiraa. Annagu (Jabuuti) waxaanu leenahay ‘Allaahu ma inaa balaqtu.” “Waan tartamayaa, haddii layga guulaysto & haddii kaleba waan aqbalaya natiijada”
Hargeysa (Ogaal/NewStatesman)- Madaxweynaha Somaliland Daahir Rayaale Kaahin, ayaa mar kale ku celiyay in uu ka degayo xilka, isla markaana uu ku qancayo natiijada Doorashada la filayo inay dalka ka dhacdo 27-ka bisha September haddii laga guulaysto.
Sida lagu sheegay Warbixin lagu faafiyay Shabakadda Wararka ee New Statesman ee Maraykanka, oo laga qoray Somaliland iyo geedi-socodkeeda Dimuqraadiyadeed, Madaxweyne Rayaale wuxuu sheegay in uu u tartamayo Jagada Madaxweynenimo, hase ahaatee, uu ku qancayo natiijada ka soo baxda Doorashada oo uu xilka isaga degayo hadii laga guulaysto.
Warbixintaas oo Wargeyska Ogaal idiin soo turjumay, ayaa waxay u dhignayd sidan;
“Bishan September ayaa la filayaaa in boqollaal kun oo qof ay ka qayb-galaan Doorasho, iyaga oo goobaha Codaynta oo ay ilaalin doonaan Ciidamo Boolis ah istaagi doona safaf ka hor inta aanay cadceeddu soo bixin, si ay u sugaan in ay u codeeyaan hoggaamiyahooda cusub. Badi dalka Soomaaliya waxa ka socda qalalaase iyo dilal. Laakiin, Somaliland oo ah qaybta waqooyi-bari ee dalkaas ayaa 18-kii sanadood ee u dambeeyay u halgamaysay inay ka xorowdo Soomaaliya. Waxaanay sheegtay inay ka madax-bannaan tahay ka